Drafitra fandrindrana hetsika sy marketing Marketing Blueprint Martech Zone
Alarobia, Septambra 28, 2011 Alatsinainy Martsa 18, 2013 Douglas Karr
Rehefa mieritreritra ireo hetsika tsy mampino natrehiko aho, toy ny Webtrend's Engage, Fifandraisan'i ExactTarget ary BlogWorld Expo - Matetika aho ihomehezana ny isan'ny faritra mihetsiketsika amin'ny hetsika iray sy ny fomba nampifanarahan'ireo fikambanana ireo azy ireo.
Tsy mpanomana hetsika aho. Izaho dia zara raha afaka mifanjevo mihoatra ny mpanjifa amin'ny fotoana iray, tsy mitsahatra mijery ny mpitsidika an'arivony. (Izany no antony iarahan'i Len miasa aminay!). Ny olona sasany kosa tsy mahazaka ny serivisy ataon'ny mpikarakara hetsika matihanina na dia izany aza ary voatery mandeha irery. Ny hetsika voalohany no henjana indrindra ary toa mihamalefaka izy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Raha vantany vao eo am-pelatananao ny hetsika iray dia efa misy mpihaino anao hampiroborobo ny hetsika manaraka. Raha mbola tsara ny hetsikao dia azonao atao ny manohy mitombo rehefa mandeha ny fotoana ary tena manangana ny lanjan'ilay hetsika sy ireo mpanohana azy ary ireo mpihaino azy.
Ity infographic avy amin'ny Hubspot ary foana Contact mitety ireo singa fototra rehetra amin'ny famolavolana hetsika sy fampiroboroboana, ao anatin'izany ny fametrahana ny hetsikao, ny fampiroboroboana ny hetsikao, ny fampiasana media sosialy, ny fanarahan-dia, ny fampandehanana ny hetsika ary ny fanarahan-dia aorian'ny hetsika. Tiako ny miresaka momba ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy ny infographic! Amin'ny alàlan'ny fanananao bitsika sioka mavitrika amin'ny tenifototra ny hetsikao dia mampiroborobo ny kalitaon'ny hetsika ianao amin'ny tambajotran'izy ireo. Izany no lakilen'ny taona manaraka… rehefa avadikareo ho mpandray anjara izy ireo!
Tags: hetsika marketingFandaminana hetsikazava-mitranga-barotra
Oct 1, 2011 amin'ny 10: 53 AM
Marina… satria ny fahaizanao mahay zavatra iray dia tsy midika hoe tsy mila paikady varotra matanjaka sy fahaizana mivarotra ianao.
8 Jun 2012 amin'ny 11:26 AM
Doug dia mahita be io, nitady sary fampahalalana mahafinaritra toy izao aho. Hizara izany amin'ny namana vitsivitsy aho. Ny fanomanana no anaran'ilay lalao!